Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Amniga DFS oo Boosaaso Gaaray [Sawirro]
Mareykanka iyo Taliban ayaa kala saxiixdey heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo colaada Afghanistan. Riix Halkan
By WARIYAHA GAROWE ONLINE , BOOSAASO
BOOSAASO, Puntland- Wafdi kasocda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo ay maalmihii u dambeeyay kusoo qulqulayeen wufuud kala duwan.
Mas'uulyiintan oo uu hogaaminayya wasiirka Amniga Gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa isugu jira, Xildhibaano katirsan labada aqal, wasiirro, Ganacsato iyo salaadiin, waxaana qorshaha safarkooda lagu sheegay ka qayb galka Munaasabad caleemo-saar oo barri la filayo inay ka dhacdo degmada Carmo ee gobolka Bari.
Wasiirka Amniga dowladda Soomaaliya, Maxamed Abuukar Islow Ducaale, ayaa faah faahiyay socdaal maanta ay kusoo gaareen magaalada Boosaso, xubno katirsan golayaasha fulinta, sharci dajinta iyo aqalka Sare ee dowladda Soomaaliya.
Islow ayaa sheegay inay u yimaadeen Boosaaso ka qayb galka Caleemo-saarka Beeldaajaha Guud ee beelaha Cali Saleebaan, Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil.
“Marka hore Waxaan doonayaa in aan u mahadcelino mas’uuliyiinta maamulka magaalada Boosaaso iyo Dowlad Goboleedka Puntland sida diiran oo ay inoo soo dhaweeyeen,waxaa wafdiga ka socda Xukuumadda oo aniga aan hoggaaminayo uu ka kooban yahay wasiiro xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare,ganacsato,salaadiin,waxaan halkani u nimid in aan ka qeybgalno caleema saarka Beeldaaje Maxamed Ismaaciil C/llaahi waxaan leenahay hambalyo," sidaas waxaa sheegay Wasiir Islow.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu tilmaamay in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay markasta garab taagantahay dhaqanka maadaama ay aas-aas u yihiin dowaldnimada waddanka.
"Xukuumaddu markasta waxaa ay garabtaagan tahay dhaqanka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin aas-aaskii xukuumadaha laga soo bilaabo Carta,anigoo ku hadlaya magaca Xukuumadda waxaan leeyahay hambalyo” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Wasiir Islow.
Wafdigan ayaa safarkooda la filayaa inuu qaato labo cisho, waxaana ay ka qayb gali doonaan Caleemo-saarka Beeldaajaha oo barri ka dhici doona sida la qorsheeyay magaalada Carmo ee gobolka Bari.
Dhinaca kele, waxaa horay u yimid magaalada Boosaso oo usii gudbay degmada Carmo xubno horay ugasoo mid noqday dowladda Federaalka Soomaaliya oo uu kamid yahay wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Cabdulqaadir Diini.
In kabadan 1000 qof oo mas'uuliyiin, siyaasiyiin, salaadiin, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu casuumay Caleemo-saarka Beeldaajaha.
Qaraxyo lagu qabtay magaalada Boosaaso
Puntland 27.01.2018. 17:59
Shir jaraa'id oo ay saxaafadda magaalada Boosaaso ugu qabteen taliska qaybta ..
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray Boosaaso [Sawirro]
Puntland 11.01.2018. 18:56
Ciidamada Puntland iyo Daacish oo ku dagaallamay gobolka Bari
Puntland 29.05.2018. 17:28
Wasiir dowlaha Dekedaha Puntland oo Boosaaso lagu dhaawacay
Puntland 31.01.2018. 20:23
Ciidamadda amniga oo fashiliyey qaraxyo lagu aasey Boosaaso
Puntland 18.12.2019. 13:18
Deni oo kormeeray Isbitaalka Guud ee Boosaaso iyo xarunta gobolka Bari
War Saxaafaded 20.10.2019. 16:41
Deni oo kulan ka qaatay Isimada Dhaqanka Gobolka Bari
Puntland 05.04.2019. 20:43
Maareeye ku xigeenkii shirkadda Golis oo Bosaso lagu dilay
Puntland 07.08.2018. 21:03
Somaliland oo laga dhawaajiyey in ay "hor-gale u tahay" Al-Shabaab 29.02.2020. 16:05
"Waxyaabaha DF qoriga ku raadineyso ee wadahadalka ay ku diidey" 29.02.2020. 15:05
Jahwareerka Galmudug oo dagaal dhiig ku daatey lagu soo afjaray 29.02.2020. 14:10
Shaakir oo hadlay kadib markii hogaanka Ahlu Sunna isku dhiibay DF 29.02.2020. 11:03
Dagaalameyaal Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah 29.02.2020. 08:00
Hogaanka Ahlu Sunna oo "isku dhiibay" Ciidamadda DF Soomaaliya 29.02.2020. 07:02